iPhone 6 Battery Kudzokorora neAsia TI IC China Manufacturer
Home > Products > iPhone Battery Nayo TI IC > iPhone 6 Battery neTI IC > iPhone 6 Battery Kudzokorora neAsia TI IC
iPhone 6 Battery Kudzokorora neAsia Texas Instruments IC
For iPhone 6G 1810mAh 4.7km 3.82V
Apple yakayemura Older iPhone mifananidzo inogona kuenderera mberi nokuda kwekukwegura mabheti. Sezvo iOS 11.3 uye 11.4 yakagadziriswa, yekutanga TI kudzivirirwa IC yakachengeteka kushandiswa ne iPhone 6 Battery Replacement. iPhone 6 Battery Kudzokorora neAAAA Grade raw materials, Tine zvingasarudzwa 6 zvevatengi vanosarudza: AA, AAA, AAAA neA-AA kudzivirira IC nesero. iPhone 6 Battery Kudzokorora kunoda kudzivirirwa kubva kune inopfuura yepamusoro kana kudarika kubudiswa kwemamiriro ezvinhu. Mune zvimwe zviitiko, Texas Instruments Li-ion kudzivirira IC inogona kupa sarudzo yakakwana yekusachengetedzwa kweteri, kuchengetedza kushanda kwakasimba uye kutonhora kunodzora panguva imwecheteyo. iPhone 6 Battery Kuchinja kunobatanidza ne 16GB / 32GB, yakakodzerwa nekhodi ye APN: 616-0804, 616-0805, 616-0809. iPhone Battery Chekutanga TI IC, kwete kungobhadhara chete nekukurumidza asiwo kuderera kwemafivha. Kunyange zvakadaro, yakarurama yebhateri simba yekucherechedza nekudzivirirwa IC inochengetedza iPhone 6 Battery Kuchinja upenyu hurefu kwenguva refu.
iPhone 6 Battery Kudzokorora neAsia TI IC Bata Ikozvino